तपाईं सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग त गरिरहनुभएको छैन ? कस्तो कसुरलाई कस्तो सजाय ? थाहा पाउनुहोस् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाईं सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग त गरिरहनुभएको छैन ? कस्तो कसुरलाई कस्तो सजाय ? थाहा पाउनुहोस्
फागुन ९ गते, २०७५ - १६:३५
काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने अब तपाइँलाई कडा कारवाही हुन सक्छ । रमाइलोको लागि त हो नि, त्यो मेरै मान्छे हो भन्दै हेलचेक्रयाइँसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
फागुन ९ गते, २०७५ - १६:३५ मा प्रकाशित